Iifashthi zase-Indian ze-shawls ezivela kwi-pashmina kufuneka zithathe indawo ephambili kwisigqobo sokugcoba kungekhona kuphela kubasetyhini befestile, kodwa ukuze zithuthuzele. Emva kwakho konke, i-pashmina ifudumala kakhulu, kwaye ngelo xesha i-wool yincinci.
I-Pashmina idla ngokuba yi-shawls ngokwabo. Nangona iyenziwa ngamakhanda kunye nezibonda. Ixabiso lentengo ye-Indian shawls esuka e-pashmina ayincinane nakakhulu. Ngoko inqabileyo enqabileyo ixabisa ukusuka kuma-dollar angama-35, kwaye inani eliphezulu le-pashmina linokufikelela kunye namawaka angama-dollar. Into into yokuba leboya kunye ne-shawls ngokwabo zenziwa ngesandla.
Kwiintaba ze-Himalaya kummandla wase-Indiya waseKashmir, iibhokhwe zithathwa, inzala engaqhelekanga yeKapa i-hircus laniger. Kwakhona kuthiwa ngamatye okanye iibhokhwe ze-cashmere. Kule ndawo kunobusi obunzima, iqondo lokushisa lihla ngaphantsi -20 0 C. Kusihlobo kushushu kwaye kusomile. Kwaye ngenxa yolu hlobo lwemoya ukuba iibhokhwe zamatye zinexesha elide kakhulu elifudumeleyo ebusika. Ngentwasahlobo le nqanawa ilahliwe. Abaalusi bahlutha kakuhle le ngubo phantsi kwesisu nangentamo. Emva koko kukho unyango olusesikweni loboya. Ukhetho olude kakhulu lukhethwa. Lapha kuzo i-shawls zaseNdiya ezenziwe ngezandla zenziwa ngesandla. I-Pashmina ngentambo ayincinci ngokungaqhelekanga, kodwa isomelele kwaye ifudumele. Ubungakanani bawo abugqithisi i-12-14 microns, ephindwe mahlanu ngaphantsi kobunzima bentloko yabantu. Ngona inkulu kakhulu ifowuni ye-Indian shawl eyenziwe nge-pashmina inokutsaliswa kalula ngendandatho. Kwaye ama-shawls avela e-pashmina aphindwe ama-8 afudumele kunama-shawls ezenziwe ngeboya bezimvu.
UPasmina akayiyo into eyenziwa namhlanje. Kwiminyaka eyiwaka emithathu edlulileyo abelusi baseNdiya bazingela kwiingubo ezivela kuloluboya obufudumele. Kodwa ngokukhawuleza abameli be-Indian castes ababenomdla kakhulu baba nesithakazelo kakhulu kule mpahla. Ingxelo yeembali - u-Muhammad Zahirdin Babur (inkulungwane ye-XVI), umsunguli wobukhosi obukhulu beMogul, wayengumdlali onzondelelo we-pashmina. U-Akbar owayengumceli wakhe wathabatha ezimbini okanye abathathu abaPasmins ngamnye ngonyaka ecaleni kweNdlela enkulu yeSilikal. La ma-shawls ase-Indiya ayegcobile ngegolide kwaye ahlotswe ngamatye anqabileyo.
Abantu baseYurophu bafunda ngoPasmina kuphela emva kokulwa kweYiputa ngeNapoleon. Phakathi kweminikelo, umnqobi wayengumthunzi waseNdiya wePasmina. Okwenyani okanye akunjalo, kukho ibali uNapoleon wayeyithandwa nguPasmina waza wanikela njengesipho kumkakhe, uJosephine. Esi sipho sasimkholisa kakhulu kangangokuba emva kwexesha uJosephine wayenomqoqo wonke wama-shawls e-shades ahlukahlukeneyo. Kwakusukela ngeli xesha ukuba ukunqotshwa kukaPasmina Yurophu kwaqala. Ekuqaleni, kwiingubo zabo zokugqoka iimpahla kunye nezikhundla zinokuba nabameli beedynasties ezilawulayo. Kwaye ama-shawls aseNdiya kunye nama-stoles ayezuze njengefa, ngokulingana neentsimbi zeentsapho.
Namhlanje i-pashmina kufuneka ibe nayo. Wonke umfazi ufuna ukufumana le nto efakekayo kwimfestile yakhe. I-pashmina yemvelo imhlophe, imvi okanye imdaka. Kodwa ngokubulela kwi-teknoloji yokudaya, iingubo zemibala, kunye nayiphina imifanekiso, zifumaneka. Ubusiya bwanamhlanje buya kwinkqubo yokunciphisa, kodwa ungayifumana imvelo, itholwe. Kodwa i-shawls ye-pashmina elithambileyo ayinakuchukumisa, ayinakulula ukuyijikeleza, i-drape. Musa ukucinga ukuba ukunciphisa kakubi kuphazamisa umgangatho wendwangu. Akunjalo. UPasmina uhlala esomeleleyo, efudumeleyo kwaye enqabileyo. Kunoko, ngokuchasene noko, ufumane ubunqamle obuninzi kunye nokuthobeka. Ngokuphindaphindiweyo isilikhi yongezwa kwiboya, ukuya kuma-50%. I-pashmina enjalo ayibhekwa njengento ebalulekileyo, bafumana umgangatho ohlukileyo. Iifashthi zaseIndiya eziphathekayo zenziwe nge-pashmina kunye nokongezwa kwesolika kuzuza i-sheen ekhangayo. I-shawl ngokwayo ilula, kodwa ifudumele kwaye ilula.
Xa ukhetha i-shawl yaseNdiya, isikhala okanye ubambe, qaphela. Ngokuqhelekileyo, abavelisi bahamba ngeengqiqo, bezama ukuthengisa iimveliso ezivela kwi-cashmere okanye nakwi-viscose ye-pashmina. Kwiimveliso ezinjalo ungayifumana into ebhaliweyo i-viscose pashmina, kodwa ayikho nto.
Namhlanje i-pashmina iveliswa ngobukhulu obukhulu. 31x175 cm - inqabunga, i-71x200 cm - itafile okanye isonga (iRussia ibibiza ngokuba yintyatyambo), 92x200 cm - i-shawl. Izindlela zokugqoka akunamkhawulo, ngaphandle kweengcinga zakho. Akunabesifazane kuphela kodwa abantu banxiba i-pashmina.
Imveliso ye-Indian fashion eyenziwe nge-pashmina ayifuni iinkcukacha ezixakile kodwa ngononophelo. Ukucoca ngokucokisekileyo kukhethwa. Ukuba uthatha isigqibo sokuhlamba i-shawl yaseNdiya, kufuneka ukuba yenziwe ngamanzi ekushiseni kwama-20-25 degrees. Ukuba amanzi ashushu kakhulu okanye atshisa kakhulu, isakhiwo seefasmm fiber siya kubhujiswa. Oku kuya kubangela ukulahlekelwa ngamandla okufudumala kwe-shawl. Ukubonakala kwakhona kulahlekile ngokukhawuleza.
Ukuze uhlambe, khetha i-detergents kuphela. Geza i-shawl ayikwazi ukucinywa. Yimbole ithayile emhlophe ngekotoni ngendlela yesikhuni, ukuze ithawula ithathe amanzi, ihambe ngokukhawuleza. Emva koko ulungele kwaye usomile endaweni ejikelezayo, kodwa ugweme ukukhanya kwelanga. Akukho mzekelo ungaxhomeki iimveliso ezivela kwi-pashmina ukuze zome. Ngokunyamekela kakuhle i-pashmina iza kukuhlala iminyaka emininzi.
Unokukhetha njani i-ambulera efanelekileyo?
Iinqwelo ze-Snowflakes ezixabisekileyo: ukuqokelela "uLacy Blizzard" nguLeDiLe
Yintoni enokuyifumana elunxwemeni: ukujonga ngokubanzi imveliso yeebhantshi zefashini 2015
Iimbandezelo zezinto ezimbini: iqoqo leempahla ze-Les Bles de Chanel
Izixhobo zokugqoka ezimhlophe
Indlela yokubopha inqabileyo yesifazane
Indlela yokugqoka iingubo: amathiphu olwaziweyo
Ubumnandi boothixo: iresiphi yekhekhe ye-strawberry i-tiramisu
Yithemba phakathi kwabantwana nabazali
Ubuthongo obuqinileyo nobunempilo bentsana
Iibhulozo phantsi kwamehlo omntwana
Indlela yokunciphisa imibimbi kufuphi nomlomo: icebiso lomntu
Ingcamango yokuhlamba kwiibhile zokugqoka
I-Hawthorn-izakhiwo ezixhamlayo kunye nokusetyenziswa kwonyango
IHoroscope yeNkunzikazi yeSimba ngoJuni 2017
Indlela yokufundisa umntwana ukuba alale ngokwahlukileyo
Abaxhasi bemisipha. Ziziphi na abafazi?
Iresiphi yesobho lompu